Ukudala ii-biogas ezivela kwitapile yenkunkuma Ukuhlaziywa okuluhlaza
Zininzi iindlela zokuvelisa amandla ahlaziyekayo okanye ukuvelisa amandla ngokusetyenziswa kwenkunkuma okanye izixhobo esele zisetyenzisiwe. Umzekelo, sizidlulisela kumzi-mveliso olingwayo ukulungiselela unyango lwamanzi amdaka kunye nemveliso ye-biogas ephuhliswe ngaphakathi kweprojekthi ye-LIFE WOGAnMBR.
Imalunga nokukwazi ukwenza kunye nokukhupha ii-biogas kwinkunkuma eqatywe umkhenkce kunye neetapile eziqhotsiweyo. Ngaba ngokwenene sinokuvelisa amandla ngokusebenzisa olu hlobo lwenkunkuma?
1 Ukukhutshwa kweBiogas
2 Iprojekthi yezityalo ezilingwayo
Imveliso yokutya efriziwe Ii-Eurofrits kunye neetshiphusi zeetapile chip Baye bavavanya kwaye bakhulisa itekhnoloji esebenzisa inwebu ukufumana nokucoca amanzi akumgangatho ophezulu. La manzi anokufumaneka kunkcenkceshelo kwaye ii-biogas eziveliswe kwinkqubo zinokusetyenziselwa ukusetyenziswa kwamandla kwizityalo zemveliso.
Okwangoku, iziphumo ezingcono zifunyenwe ekufumaneni i-biogas kwizityalo zeMatutano. Amashishini amabini okutya avavanye ukuveliswa kwe-biogas esebenzisa esi sityalo sokuvavanya usebenzisa itekhnoloji ye-AnMBR. I-Eurofrits, ebekwe ePozuelo de Alarcón (eMadrid), ivelisa ikakhulu inyama eqanduselweyo, inkukhu, intlanzi, ii-croquettes kunye neetapile kunye neetshipsi zeMatutano eBurgos.
Iprojekthi yezityalo ezilingwayo
Iprojekthi ineziphumo ezilungileyo kwizityalo ezilingwayo ezisebenza kunye nemithwalo eyahlukeneyo ye-organic. I-biomass iqhube kakuhle. Kuyenzeka ukufikelela kwi-9.600 yeelitha ze-biogas ngosuku ngemigane ye-methane engama-75%. Oku kubonisa ubuchule, uqoqosho kunye nokusingqongileyo kolu hlobo lweprojekthi. Isibonelelo esinaso ayisiyokuvelisa i-biogas kuphela kwimveliso yamandla kodwa ikwahluza amanzi anokusetyenziselwa ukunkcenkceshela. Injongo kukunciphisa imveliso yelindle kangangoko kunokwenzeka kwaye uzinzile ngokwakho ngokwamandla amandla ngokwembono.
Ukongeza, obu buchule buyaqhelaniswa nayo nayiphi na inkqubo kwishishini lokutya, kunceda ukunciphisa ukusetyenziswa kwezinto ezingafunekiyo kunye nokunciphisa inkunkuma evelisiweyo. Ngale nkqubo inwebu, ukucoca amanzi amdaka kwimizi-mveliso kuyaphunyezwa yenze ilungele ukunkcenkceshela kuba zonke iintlobo zamasuntswana aqinileyo abangela ukuvaleka kwimibhobho ayanyamalala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biogas » Yenza i-biogas evela kwinkunkuma yeetapile
U-Elon Musk: "Ukuba andikwazi ukusombulula iingxaki zamandla e-Australia ngeentsuku ezili-100, ndiza kuyenza simahla"